भगवानको वरदानकैं सदुपयोग गर्दैछु -:भोजपुर आईडल विजेता बविना राई – Online Wave TV
भोजपुर पाङ्चा ९ मा जन्मेकी बविना राईले सांगीतिक यात्रामा आफनो पाईला विस्तारैं अघि बढाईरहेकी छिन् । हालैं छैंटौं भोजपुर आईडल विजेता भएकी बविना आफनो भविष्य संगीतमा खोजीरहेकी छिन् । उनी भन्छिन् म अझैं उठन बाँकी नै छ । हिड्न बाँकी नैं छ । सबैको साथ र माया खोजीरहेकी बविनासंग ऐश्वर्य श्रेष्ठले गर्नु भएको छोटो सांगीतिक कुराकानी ।
भोजपुर कुन ठाँउमा यहाँको जन्म भएको हो ?
मेरो जन्म भोजपुर आम्चोक १० साविक पाङ्चा ९ मा भएको हो ।
संगीतमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? प्रेरणा ?
संगीतमा सानैंदेखि रुचि भएको हुनाले स्कुलमा हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन्थे । त्यसमा म प्रथम भएकी थिए । सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुदैं जाँदा प्राय सबैंले मेरो आवाज मन पराईदिनुभयो । जसले गर्दा मलाई संगीतमा अघि बढन सहज भयो । आफन्त, परिवार,साथीभाइ, शुभचिन्तक नैं मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ ।
भोजपुर आईडलको छैंटौं संस्करण जित्नुभयो अब तपाईको सांगीतिक यात्रा कसरी अघि बढछ ?
भोजपुर आईडल जिते । यो खुशीको कुरा हो र म खुशी पनि छु । भोजपुर आईडलले मलाई भर्खर जन्माउदैंछ । म अझैं उठन बाँकी नै छ । हिड्न बाँकी नैं छ । यस क्षेत्रमा यात्रा गर्नलाई आफन्त, परिवार,साथीभाइ, शुभचिन्तक सबैंको साथ र सहयोगको आवश्यक छ र अपेक्षा गरेकी छु । अबको मेरो बाटो भनेको संगीतलाई निरन्तरता दिनु नैं हो ।
संगीत सिकिरहनुभएको छ ?
मैंले अहिलेसम्म सांगीतिक शिक्षा लिएको छैंन् । भगवानको वरदानकैं सदुपयोग गरीरहेकी छु । यतिले मात्रा पुग्दैंन । पक्कैं पनि आगामी दिनहरुमा संगीत साधाना गर्ने सोचमा छु ।
यहाँको कुनैं गीत रेकर्ड भएको छ वा हुनेवाला छ कि ?
हजुर, मैंले कक्षा ८ मा पढदैं गर्दा गीत रेकर्ड गराएकी थिए । मेरो काका सुमन राईको सहयोगमा मैंले गाउने अवसर पाएकी थिए । पुर्वेली लोकगीत भुइदल अल्लारेको शब्द,सुमन राईको संगीत,सुमन राई र मेरो आवाजमा रहेको छ । यहाँहरुको साथ पाए भने शायद चाँंडैं हुन्छ होला ।
तपाईलाई कस्तो गीतसंगीत मन पर्छ ?
मलाई सबैं किसिमको गीतसंगीत मनपर्छ । सबैं विधाको गीत सुन्छु,गाउँछु ।
मन पर्ने गायक गायिका भनेर एक दुई जनाको नाम लिन त गाह्रो हुन्छ । सबैं जनाको आ आफनैं गायनशैंली र आवाज हुन्छ त्यही अनुसार मिठास हुन्छ सबैं खाले गीत सुन्ने हुनाले प्राय सबैं मनपर्छ । नाम लिनैंपर्दा राजेशपायल राई,मेलिना राई ।
तपाईको आवाज मन पराउने श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ ?
म यहाँसम्म पुग्नुमा तपाईहरुकै साथ सहयोगले गर्दा हो । त्यसका लागि तपाई सम्पूर्णलाई धेरैं धेरैं धन्यवाद । आगामी दिनहरुमा पनि यसै गरी साथ सहयोग गरिदिनुहुनेछ । गरिदिनुहोस् ।